केलगोगको स्वस्थ शुरुआत जेपीएमए, इंक
यहाँ देखाइएको अनाजहरू हाम्रो सबैभन्दा लोकप्रिय अनाज WIC कार्यक्रममा उपलब्ध छन्। तर ध्यान राख्नुहोस्, हरेक WIC कार्यक्रममा सबै उत्पादनहरू र आकारहरू अनुमति छैन। आफ्नो WICShopper स्क्यानर संग आफ्नो अनाज स्क्यान गर्न निश्चित गर्नुहोस् कि यो तपाइँको लागि योग्य छ भनेर पुष्टि गर्न!
तपाईंले आफ्नो हातहरू पूरा गर्नुभयो। केलगोगले आफ्नो बच्चाहरु को लागि सूची को शीर्ष मा राम्रो पोषण को लागि सुझाव र विचारहरु संग एक पूरी वेबसाइट बनाएको छ।
चामलको दाना क्रस गर्नुहोस् र क्यान्ड माछा वा जमिन टर्कीको साथ मिक्स गर्नुहोस् माछा प्याटिज र स्वादपूर्ण मीटबलहरूमा उत्कृष्ट बनावट थप्न। माउलीलो मासु जस्ता हार्दिक मासुका लागि कुचिएको गहुँ फ्लेक्स वा फ्रोस्टेड क्रेडेड गहुँ जोड्न कोशिस गर्नुहोस् माटरलोफमा केही फाइबर र मिठोपनको टच प्रदान गर्न। विस्तृत व्यंजनहरू र पोषण जानकारीको लागि, हेल्थबेगनिंग्ज.कटमा जानुहोस्।
थोरै मात्रामा तेल र मसालाको केही ड्यासहरूसँग एक कप मर्न वा चावल फ्लेक्स टस गर्नुहोस्। एक बगैचा सलाद संग इटालियन seasoning प्रयास गर्नुहोस्। दक्षिणपश्चिमी किकको साथ केहि चीजका लागि ओरेगानो, मिर्च पाउडर र जीराको मिश्रण प्रयोग गर्नुहोस्। विस्तृत व्यंजनहरू र पोषण जानकारीको लागि, हेल्थबेजिनिंग्स.कटमा जानुहोस्।
कटा एवाकोडो एक ठूलो अनाज टपिंग बनाउँछ। हो, तपाईंले सही, एभोकैडो सुन्नुभयो! सादा दही को केहि गुलाबी संग शीर्ष मकई फ्लेक्स, diced avocado जोडें र फेरि मिर्च पाउडर या केयरी संग समाप्त हो यदि तपाईं थोडा गर्मी चाहते हो। यो भोजन, मिठो र सहिष्णु संयोजन कुनै पनि भोजनको लागि राम्रो स्वाद गर्दछ। अन्य संयोजन विचारहरु को लागि, व्यंजनहरु र पोषण जानकारी को लागि, यहां जाएँ: healthybeginnings.com।
मोटो हार्दिक स्टू वा एक कप वा दुई कुचिएको ब्राँन फ्लाक वा हिम कुकर वा प्यानमा पालेको गहुँको साथ काली मिर्च। विस्तृत व्यंजनहरू र पोषण जानकारीको लागि, हेल्थबेगनिंग्ज.कटमा जानुहोस्।
यो सजिलो छ, तपाईंको मनपर्ने मसालाको साथ मिश्रित कुचिएको मकै फ्लेक्स हो। त्यसपछि, हल्का कुटेको अण्डा गोरोमा कुखुरा वा माछा डुबाउनुहोस् र अन्नको कोटिंगमा रोल गर्नुहोस्। मार्फत पकाउँदा र कुरकुरा सम्म बेक गर्नुहोस्। मजा लिनुहोस्! विस्तृत व्यंजनहरू र पोषण सम्बन्धी जानकारीको लागि, healthybeginnings.com हेर्नुहोस्।
बेक गर्नुहोस् र ब्रेकफास्ट मफिनहरूको एक समूहलाई सप्ताहन्तमा उच्च फाइबर गेरा जस्ता फ्रिस्टेड गहुँ वा ब्रान फ्लेक्स प्रयोग गरी फ्रिज गर्नुहोस्। प्रत्येक बिहान, माइक्रोवेभमा माफिन पप गर्नुहोस् २० सेकेन्डको लागि एक पटक न्यानो र नरम सम्म। त्यसो भए, मफिनलाई आधा मा काट्नुहोस् र बदाम बटर र केराका स्लाइसहरू, टर्की र चीजको एक टुक्रा, वा फल संरक्षणको एक टचले भर्नुहोस्। विस्तृत व्यंजनहरू र पोषण जानकारीको लागि, हेल्थबेजिनिंग्स.कट हेर्नुहोस्।